महरा प्रकरणबारे शेखर कोइरालाः ‘महराले तत्काल सांसद पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ’ – Online Marg
मङ्गलबार ,फाल्गुण १३ २०७६
महरा प्रकरणबारे शेखर कोइरालाः ‘महराले तत्काल सांसद पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ’
Posted on Sunday, October 6th, 2019 9:12 AM Sunday, October 6th, 2019 9:19 AM by अनलाइन मार्ग संवाददाता
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझिनसक्नु भन्छन् । अहिलेको विकसित घटनाक्रमले राजनीतिक केही भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
यसपालाको दशैं कहाँ मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
मेरो पुख्र्यौली घर विराटनगर हो, त्यहीं छु । साथीभाइ नै परिवार हुन् मेरो त ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको राजनीतिलाई केही भन्न सक्ने अवस्थै छैन । बुझिनसक्नुका घटनाक्रम अगाडि आएका छन् । त्यसलाई कसरी लिने भन्ने नै भएन ।
के कारणले यस्ता घटनाहरु भए ?
देशमा घटनाहरु त घटिरहन्छ । हरेक देशमा यस्ता घटनाहरु घट्छन् । तर, ती घटनहरुले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदै छ त्यो ठूलो कुरा हो । वास्तमा हामीहरुमा नैतिकताको ठूलो खडेरी भएको छ । यसमा खरो भएर उभिन सकेनौं । राजनीति गर्ने व्यक्तिले सबै कुरा सोच, विचार गरेर गर्नुपर्छ ।
महरा घटना प्रकरणतिर तपाईंको संकेत हो ?
कृष्णबहादुर महराजीको कुरा गर्दा सञ्चारमाध्यममा सुन्दा र अखबारहरु पढ्दा उहाँको यो व्यवहार पहिलादेखिकै जस्तो लाग्छ । तर, अहिले आएर यो घटना किन र कसरी भयो ? कसले गरायो ? सामान्य तरिकाले भएको जस्तो लाग्दैन । त्यसमा अरु धेरै कुरा जोडिएका छन् जस्तो लाग्छ । म गलत पनि हुन सक्छु । मानव अधिकारले पनि यसको छानविन गर्नुपर्छ भनेको छ । प्रहरीले त गरिराखेको होला ।
मानवअधिकार आयोगले त छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेको तपाईंलाई के लाग्छ ?
मानव अधिकारले त आफ्नो ठाउँबाट गर्छहोला । तर, यसमा अलिकति राजनीतिक पाटो पनि केलाउनुपर्छ ।
यो मुद्दामा कसैको राजनीतिक स्वार्थ छ ?
छैन भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
पार्टी्भित्रैबाट हुन सक्छ ?
त्यो म कसरी भनौ । तर, छैन भनेर म भन्न सक्दिँन ।
कृष्णबहादुर महरामाथि षडयन्त्र छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो खालको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त अखबारहरुमा पहिलादेखि नै आइरहेको हो । तर, अहिले एक्कासी कसरी बाहिर आयो भन्ने मुख्य कुरा हो ।
रोशनी शाहीले हाम्रो पुरानै सम्बन्ध हो भनेर बताइसक्नुभएको छ नि ?
उहाँले पनि भन्नुभयो होला । सञ्चारमाध्यमहरुबाट पनि आइरहेका छँदैथिए । तर, अहिले जसरी घटनाक्रमहरु बाहिर आयो । यसलाई मानव अधिकारले हेर्ने आफ्नो ठाउँमा, छ । प्रहरीले छानविन गर्ने आफ्नो कुरा भयो । तर, त्यो भन्दाबाहेक पनि पत्रकारहरुले अर्कै ढंगले खोज्नुपर्छ भन्ने खोजेको हो ।
यो घटनालाई राजनीतिक चस्माले हेर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रहरी, मानवअधिकार, राज्यले हेर्ने काम त गरिहाल्छ नि । तर, राजनीतिक हिसावले पनि खोजबिन गर्नुपर्छ । मलाई अच्म लागेको कुरा त ‘हाम्रा कुरा डटकमका प्रधानसम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीलाई जुन खालको धम्की आइरहेको छ । त्यो एदमै निन्दनीय र गलत छ । जसले धम्की दिएको हो । त्यो बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले यसलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । उहाँ र उहाँका परिवारको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यो बडो गम्भीर विषय हो । एउटा पत्रकारले खोज पत्रकारिता गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँलाई जसरी फोनमार्पmत धम्कीहरु दिइरहिएको छ । सामाजिक सञ्चालहरुमा विभिन्न कुरा लेखेर तर्साउने काम जसरी गरिएको त्यसले उहाँमाथि सांघातिक हमला पनि हुन सक्छ ।
रोशनी शाहीले त मलाई फसाइयो मैले अन्तर्वार्ता दिन चाहेको थिइनँ भनेर ?
उहाँले के भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो भन्ने कुरा त हामीले अखबारमै पढेको हो । म अनुसन्धानकर्ता त होइन नि । यसको छानविन त राज्य, प्रहरी र मानव अधिकारले गर्नुपर्छ ।
महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
मैले पहिला नै भनेको नैतिकताको आधारमा त उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो । उहाँले दिनुभएन भने मैले के गर्न सक्छु र । म को हो उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्ने ? त्यति त म पहिलादेखि भनिरहेको छु । हाम्रै नेताहरुलाई भन्दैछु नैतिकताको खडेरी भयो हाम्रो राजनीतिमा भनेर ।
कांग्रेसका नेताहरुले नैतिकताको त खोजी गर्नुपर्छ होइन र ?
कांग्रेसका मात्र होइन कम्युनिस्टहरुमा पनि छैन । सबै नेताहरुमा नैतिकताको अनिकाल छ । यस्तो नैतिकताले राजनीति गर्न खोज्छौं । अनि त्यो राजनीतिले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ?
त्यो भए नेताहरुमा नैतिकता छैन ?
हो नि । अनि राजनीतिक गरेर के फाइदा हुन्छ । नैतिकताबिनाको राजनीति त राजनीति भएन नि ।
धनसम्पत्ति हुने बित्तिकै नेता भइहाल्ने हो ?
हो त नि । अहिले सबैमा त्यही देखिएको छ ।
कांग्रेसमा पनि धनसम्पत्ति हेरेर नेता मान्छे चलन छ नि ?
यस्तो कुरा क्षणिक हुन्छ । दीर्घकालीन हुँदैन । विजयदशी भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय हो । सत्यको बाटो पछ्याउन धेरै कठिन हुन्छ । म त सत्यको बाटो हिड्न खोजिरहेको छु । तर, सधैं सत्यको विजय हुन्छ त्यसकारण सत्यको बाटो हिडौं । त्यो बाटो कठिन छ । कठिन बाटोमा हिड्दा अप्ठ्यारा पनि आइलाग्छन् ।
नेताहरु जनचाहना अनुसार काम गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन नि होइन ?
आउँदैन थियो नि । नेताहरुले गरेनन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको हो ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको साढे तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । पौने चार वर्ष नै आगामी फागुनमा त महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका नेतृत्वहरुलाई अधिवेशन गर्ने त्यति चासो दिइरहेको जस्तो लाग्दैन । महाधिवेसनको तयारी नै गरेको छैन । विभागहरु बनाउनेतिर लागिराखेका छौं । क्रियाशील नविकरणको कुरा त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने छ । यी विषय छलफल गरेर अगाडि जाँदा त्यसले एउटा मूर्त रुप दिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा एक खालको उर्जा पनि आउँथ्यो । नेपालमा लोकतन्त्र जोगाउन पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन छिटोछिटो हुन अत्यन्त जरुरी छ ।
महाधिवेशन गर्न पार्टी सभापतिले चाहनु पर्यो नि ?
उहाँले चाहनुहुन्न भने नगर्ने त ? अहिले उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ । त्यो ठाउँमा आउन उहाँले धेरै दुःख खष्ट गर्नुभएको । जेल, नेल बस्नुभएको छ । डेमोक्रेसीका लागि लड्नुभएको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, नेपाली कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशन भएन भने सयम लम्बिएर जान्छ । उहाँ कोशिष गरिरहनुभएको लम्ब्याउने । अहिले विभाग बनाउनेतिर लागिरहनुभएको छ । महाधिवेशन नगर्ने हो भने त नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ । नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनुभनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । जुन उहाँ बोलिरहनुभएको छ । अधिनायवादतिर देश गयो भनेर । किन गयो भन्दा नेपाली कांग्रेस कमजोर गएको हो नि । कांग्रेस बलियो भए न मुलुक अधिनायकवादतिर जाँदैन । पञ्चायतमा पनि नेपाली कांग्रेस बलियो थियो । वीपीले एकचोटी उभिएर बोल्दा त्यसको माने हुन्थ्यो । गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबु बोल्दा माने राख्थ्यो पञ्चायतकालमा ।
अहिले तपाईंहरुको बोलीमा कुनै प्रभावकारिता छैन नि ?
मेरो बोलीमा प्रभावकारिता नहुनु स्वाभाविक हो । तर, नेताहरुको बोलीमा त प्रभावकारिता हुनुप¥यो नि । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन त गर्न सक्दैन अनि देशमा कसरी लोकतन्त्र बाँच्छ त नत्र कसरी बाँच्ने हो । नेपालको इतिहास हेर्नुस् । लोकतन्त्र बँचाउन नेपाली कांग्रेस भूमिका रहन्छ । र, जुन–जुन बेला नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको छ । त्यति बेला लोकतन्त्र खतरामा परिरहेको छ । यो कुरा त नेताहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला ।
नेपाली कांग्रेसभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ?
मलाई पटक्कै मन परेको छैन । विभाग गठन गरेर कसलाई देखाउन खोजेको ? विश्व हाँस्छ ।
भातृ संगठनहरुको नेतृत्व पनि छैन नि ?
यतिबेला भ्रातृ संस्थाहरुको कुनै नेतृत्व छैन । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ कुनै ठाउँमा नेतृत्व छैन । दलित संघ चुनाव नभएको सात वर्ष भइसक्यो । किसान संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष भइसकेको छ । हशिले विधमग बनाउँनु भन्दा यो गरे हुन्छ नि । जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुहुन्न ।
तपाईंहरुको नेतृत्वको होडवाजीले शेरबहादुर देउवा तर्सिनुभएको छ नि ?
किन तर्सिनु ? उहाँ पार्टी सभापति हो । हामी उहाँलाई मान्छौं । काम समयमा गरौं भन्दा किन तर्सिनुप¥यो । पार्टीमा कोही कसैसित तर्सिनुपर्ने आवश्यकता त छैन ।
आउने महाधिवेशनमा तपाईं सभापतिको उम्मेदवार हो ?
महाधिवेशनमा गर्न धेरै समय छ, गरौंला केही हतार छैन ।
कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन समयमा न हुने भयो होइन ?
नेतृत्वको चाहना अधिवेशन लम्ब्याएर विवाद बनाउ भन्ने छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ एजेन्डा के होला ?
यसमा हामी सबै नेपालीहरु यसमा मैले नेपाली कांग्रेस मात्रै भनेको होइन । नेपाली जनता, नेपालीहरु चिनीयाँ राष्ट्रपतिको एकदमै उत्सुकताको साथ हामीहरुले हेरिरहेका छौं । त्यो उत्सुकतालाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने मात्रै हो । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध अरनिकोदेखिको हो । यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन वीपी कोइरालाले खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । त्यसरी अगाडि बढ्यो भने हामी ठीक ठाउँमा हुन्छौं । के माग्ने, के लिने के दिने भन्ने कुरामा म धेरै विश्वास गर्ने मान्छे होइन ।
रेलमार्ग, सुरुङमार्गलगायत अन्य पूर्वाधारका कुराहरु आएका छन् नि ?
एउटा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभमा आउनुपर्छ । किन भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पहल भएको छ । त्यसपछि डा. प्रकाशशरण महत पर्यटन मन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । बीआरआई भन्छौं हामी त्यो ग्रान्डमा बनाउने होइन । बीआरआई भनेको चाइनिज बैंकबाट लोन लिन्छ । कुनै पनि देश लोन लिएर बनाउने हो । हामीहरुले पनि लोन लिएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पाँच खर्बको रेल ल्याउँदा हाम्रो गच्छेले भ्याउँछ भ्याउँदैन त्यो विचार गर्नुपर्छ । जहिले पनि लोन लिँदा देशको आर्थिक अवस्था हेरेर लिनुपर्छ । रेललाई प्राथमिकता नदिएर हजार मेगावाटको जलासाययुक्त हाइड्रो पावर एउटा, त्यपछि ट्रान्समिसन र किमाथान्कादेखि धरानसम्मको एक्सप्रेस सडक र रसुवागडीदेखि काठमााडौंसम्म एक्सप्रेस बनाउनुपर्छ । यी कुराको लागि नेपालले लोन तिर्न सक्छ । त्यो पनि पाँच वर्ष्भित्र बनाइसक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र रेलमा जानुपर्छ ।
त्यसो भए रेलको कुरा गर्नुहुँदैन चिनियाँ राष्ट्रपति आएको बेला ?
अहिले रेललाई प्राथमिकतामा नराखौं भन्ने मेरो मान्यता हो । दुईवटा एक्सप्रेस सडकलाई राखौं । अन्य विकास निर्माणलाई ध्यान दिऔं । तत्काललाई है फेरि रेल नचाहिने भन्ने होइन । भारत र चीनको सामान नै ओहोर–दोहोर हुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन । तर, अहिले नेपालले रेलमा के पठाउने ? पाँच वर्षमा रेल आउँछ अनि खाद्य सामाग्री चिनबाट मौ पैठारी भयो भने व्यापार घाटा कहाँ पुग्छ हाम्रो ? यो अवस्थाले त लोन पनि तिर्न सक्दैन । इन्ट्रेसतिर पनि जाओं । सुरु भएको १५ वर्षदेखि इन्ट्रेस तिर्ने भनौं । ऋण पनि विश्व बैंक जस्ता ठाउँबाट लिनुपर्छ, ब्याज पनि सस्तो हुन्छ । यतातिर लाग्ने हो नि । उसले जे–जे भन्यो पछाडि दौडिहाल्ने त ?
Posted in राजनीतिक तथा सामाजिक कुराकानी
हिरा रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ललिता निवास प्रकरणका जानकार/ललिता निवास ख�
आवश्यक परे मन्त्री बन्छुः नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय�
‘The Leader’ का बिषयमा रवि लामिछानेको भिडियो अन्तरवार्ता
चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले प्रतिक्षित टेल�
‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानबाट निष्कासित भएपछि ज्ञानेन्द्र शाही के भन्छन ?
आज मात्रै 'नेपालका लागि नेपाली अभियान' अभियानका सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो �
रमेश खरेल मैदानमा, भण्डाफोरको सूचिमा को–को ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले देश र जनताका लागि खटिरहने बताएका छ�
भीम रावलले तपाईको अन्तरवार्ता आज म लिन्छु भनेपछि धमलाको हावागोल ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद भी�
आमाको घाटी रे*ने पापिनी छोरीबारे पुण्य गौतमले खुलाए अहिलेसम्म नखुलेको कुरा ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता पूण्य गौतमले भक्तपुर हत्याकाण्डमा �
केपी ओली मेरो आईडल हुन्, खुट्टा तान्ने काम बन्द गरौँः अनिल शाह (भिडियोसहित)
चर्चित बैँकर अनिल केशरी शाहले कुनै पनि क्षेत्रमा योग्य नेतृत्व नभएकाले नेप
नीर शाहको ठोकुवाः राजा विरेन्द्रलाई पहिलो गोली छोरा दिपेन्द्रले नै हानेका हुन् ! (भिडियोसहित)
बरिष्ठ कलाकार नीर शाहले दरबार हत्याकाण्डको बारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेक�
उडिरहेकै विमानमा धमलाले लिए प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तरवार्ता, सरकार फेरिन्छ भन्नेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो दनक [EXCLUSIVE]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र मोदीबीच नेपाल भारत द्धिपक्षीय सम्बन्�
रोशनी शाही काममा फर्किइन्, यस्तो छ महराको तयारी
दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द
विवाह गरेको हप्तादिन नबित्दै एक युवतीले गरिन आत्महत्या
राजेश हमाल पक्राउ !
गायक आरडीको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘सुस्तरी’ बजारमा (भिडियोसहित)
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव’
बाँस्कोटालाई अर्को आपत, सातवटा डायरी कसले लग्यो ?
क्याम्पस बचाउन नेविसंघ पुल्चोकले थालेको आन्दोलनमा नेता महरको ऐक्यबद्धता